Taageere qudha Laga Jaray Iyo Cabsida Sii Kordhaysa Ee Magaalooyinka Marti Gallinaya Ciyaaraha Koobka Aduunka Brazil
HomeWararka MaantaTaageere qudha Laga Jaray Iyo Cabsida Sii Kordhaysa Ee Magaalooyinka Marti Gallinaya Ciyaaraha Koobka Aduunka Brazil
Diyaar garowga tartanka koobka aduunka 2014 ee wadanka Brazil ayay mashaqo kale isku gedaantay, kadib dagaal dhex maray koox taageerayaal u ah laba kooxood oo heerka labaad ee kubada cagta wadankaas oo la kala yidhaahdo Santa Cruz iyo Parana, uu ku naf waayay mid kamid ah taageerayaashii dagaalamayay oo madaxa lagala dhacay shubka marmarka ah ee Fadhiga Musqulaha.
Dhacdadan argagaxa leh ayaa Maalintii Sabtidii ka dhacday garoonka Arruda Stadium ee magaalada Recife oo kamid ah magaalooyinka marti gallinaya qaar kamid ah ciyaaraha koobka aduunka ee sanadkan bisha Inagu soo foolka leh ka qabsoomaya wadanka Brazil, waxaanay ciidamadu amaanku u xidh-xidhee dilkan tobaneeyo qof.
In ka badan 40 taageerayaal ah oo laba qaybood u qabsan ayaa isku dhac ku dhex maray garoonka gudihiisa , kuwaas oo isku adeegsaday, Burburka Shubka Musqulaha Garoonka oo ay jabsadeen, taas oo uu aakhirkii ku naf waayay wiil magaciisa lagu sheegay Ricardo Gomes da Silva.
Iyadoo Lix todobaad oo kali ahi inaga xigaan bilowga ciyaaraha koobka aduunka, hadana waxa jira cabsiyo badan oo la soo darsaya diyaargarowgiisa wadankan laga doonayo inuu qaabilo culayska taageerayaasha dunida oo aad u badan.
Masiibadan u dmabeysana waxay imanaysa iyadoo ay hore uga dhaceen dhowr dhimasho oo ay ku nafwaayeen shaqaalaha qaar kamid ah garoomada dib u dhiska iyo casriyeyntu ku socoto.
Magaalada Recifa ee dilku ka dhacayna waxay marti gallinaysaa shan ciyaarood oo kamid ah kulamada tartanka koobka Aduunka.